GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Haitian Creole Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Ukrainian Vietnamese
“Ọ ga-adị m mma ma a sị na ndị mụrụ m na-ekwe m mgbe ụfọdụ ka m gaa ebe m chọrọ ịga.”—Sera, dị afọ iri na asatọ.
“M na-ajụkarị ndị mụrụ m ihe mere na ha anaghị atụkwasị m obi mgbe ọ bụla m chọrọ iso ndị enyi m kpapụ. Ha na-agwakarị m: ‘Anyị tụkwasịrị gị obi, ma anyị atụkwasịghị ndị enyi gị obi.’”—Christine, dị afọ iri na asatọ.
DỊ KA Sera na Christine, ị̀ chọrọ ka ndị mụrụ gị hapụ gị ka ị na-ekpebi ihe ị ga-eme? Tupu ha ahapụ gị ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme, i kwesịrị ime ka ha tụkwasị gị obi. Ma e nwere ike iji ịtụkwasị mmadụ obi tụnyere ego. Ịkpata ego na-esi ike, ma imefu ya dị mfe. N’agbanyeghị ego ole e nyere gị, o nwere ike ịdị gị ka o zubeghị. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na isii aha ya bụ Iliana kwuru, sị: “Mgbe ọ bụla m chọrọ ịpụ apụ, ndị mụrụ m na-ajụ m ọtụtụ ajụjụ banyere ebe m na-aga, ndị mụ na ha so aga, ihe m na-aga ime, na mgbe m ga-alọta. Ama m na ọ bụ ha mụrụ m, ma mgbe ọ bụla ha jụrụ m ụdị ajụjụ ahụ, ọ na-ewe m iwe!”
Gịnị ka ị ga-eme ka ndị mụrụ gị tụkwasịkwuo gị obi ma kwe ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme? Tupu anyị azaa ajụjụ a, ka anyị buru ụzọ tụlee ihe mere ihe banyere ntụkwasị obi ji esere ọtụtụ ndị nne na nna na ụmụ ha bụ́ ndị na-eto eto ezigbo okwu.
Nsogbu Ndị Na-eto Eto Na-enwe
Baịbụl kwuru na ‘nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya.’ (Jenesis 2:24) N’eziokwu, nwaanyị ga-ahapụkwa nna ya na nne ya. Ma ị̀ bụ nwoke ma ị̀ bụ nwaanyị, otu ihe dị oké mkpa i kwesịrị ịmụta n’oge ị na-eto eto bụ otú ị ga-esi bie ndụ mgbe i toro, ya bụ, mgbe ị ga-enwe ike ịhapụ ndị mụrụ gị, ma eleghị anya, nweekwa ezinụlọ nke gị. *
Ka e were ya na e nwere ọnụ ụzọ a sịrị na mmadụ ga-agafe ma o ruhaala afọ dị otú a. Mmadụ ịghọ onye toro eto adịghị ka isi n’ọnụ ụzọ ahụ gafee mgbe o ruru afọ ole ahụ e kwuru. Mmadụ na-eji nwayọọ nwayọọ aghọ onye toro eto, dị ka ebe mmadụ na-arị steepụ ụlọ elu. Ọ ga na-arị ya otu otu. O nwere ike ịbụ na ebe ndị mụrụ gị chere na i ruola na steepụ ahụ abụghị ebe gịnwa chere na i ruola. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Maria chere na ndị mụrụ ya anaghị atụkwasị ya obi n’ihe banyere ụdị ndị ọ na-emeta enyi. O kwuru, sị: “Adị m afọ iri abụọ, ma ụdị ihe a ka na-esere mụ na ndị mụrụ m okwu! Ha chere na mụ enweghị ike izere ọnwụnwa. Agbalịala m ịgwa ha na e nweela ọnwụnwa ndị m zeere, ma o meghị ka obi sie ha ike!”
Ihe Maria kwuru gosiri na ihe banyere ntụkwasị obi nwere ike ịna-esere ndị na-eto eto na ndị mụrụ ha ezigbo okwu. Ọ̀ bụ otú ọ dị n’ezinụlọ unu? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka ị ga-eme ka ndị mụrụ gị tụkwasịkwuo gị obi? Ọ bụrụ na ha anaghịzi atụkwasị gị obi n’ihi àgwà na-adịghị mma ị kpara n’oge gara aga, gịnị ka ị ga-eme ka ha malite ịtụkwasị gị obi ọzọ?
Gosi na E Kwesịrị Ịtụkwasị Gị Obi
Pọl onyeozi degaara Ndị Kraịst narị afọ mbụ akwụkwọ ozi, sị: “Na-anwapụtanụ ihe unu onwe unu bụ.” (2 Ndị Kọrịnt 13:5) Ọ bụghị ndị na-eto eto ka ọ gwara okwu ahụ, ma ihe ahụ o kwuru ga-abara ha uru. I gosi na e kwesịrị ịtụkwasị gị obi, ọ ga-eme ka ndị mụrụ gị na-ahapụ gị ka ị na-ekpebi ihe ndị ị ga-eme. Ọ pụtaghị na i kwesịrị izu okè. A sị ka e kwuwe, mmadụ niile na-emehie. (Ekliziastis 7:20) Ma, otú i si akpa àgwà ọ̀ na-eme ka ndị mụrụ gị ghara ịtụkwasị gị obi?
Dị ka ihe atụ, Pọl dere, sị: “Anyị na-achọ ka anyị na-eme ihe n’eziokwu n’ihe niile.” (Ndị Hibru 13:18) Jụọ onwe gị, sị: ‘M̀ na-agwa ndị mụrụ m eziokwu mgbe m na-agwa ha ebe m gara na ihe m mere?’ Ụfọdụ ndị na-eto eto achọpụtala na ha kwesịrị ịgbanwe otú ha si akpa àgwà. Ka anyị tụlee ihe ha kwuru. Ị gụchaa ya, zaa ajụjụ ndị e dere n’okpuru ya.
Lori: “O nwere mgbe m na-ezigara otu nwa okorobịa m hụrụ n’anya ozi iimel na nzuzo. Ndị mụrụ m chọpụtara, gwa m ka m kwụsị ya. M kwere ha nkwa na m ga-akwụsị ya, ma akwụsịghị m. M nọ na-ezigara ya ozi ruo otu afọ. Ọ na-abụ, m zigara nwa okorobịa ahụ ozi iimel, ndị mụrụ m achọpụta, mụ arịọ ha, kwe ha nkwa na m ga-akwụsị ya. Ma e mechaa, mụ emee ya ọzọ. O nwere ebe o ruru, ha anaghịzi ekweta ihe ọ bụla m gwara ha!”
Gịnị ka i chere mere ndị mụrụ Lori ji kwụsị ịtụkwasị ya obi? ․․․․․
Ọ bụrụ na ị bụ papa Lori ma ọ bụ mama ya, gịnị ka ị gaara eme, maka gịnị? ․․․․․
Mgbe mbụ ahụ ndị mụrụ Lori gwara ya ka ọ kwụsị izigara onye ahụ ozi iimel, gịnị ka ọ gaara eme iji gosi na e kwesịrị ịtụkwasị ya obi? ․․․․․
Beverly: “O nwere mgbe ndị mụrụ m na-atụkwasịghị m obi n’ihe gbasara ụmụ nwoke. Ma, aghọtala m ihe kpatara ya. N’oge ahụ, mụ na ụmụ nwoke abụọ ndị ji afọ abụọ tọọ m na-akpachi anya. Mụ na ha na-ekwu okwu n’ekwe ntị ruo ọtụtụ awa. Anyị gaa oriri na nkwari, ọ na-afọ obere ka ọ bụrụ naanị ha ka mụ na ha na-ekwurịta okwu. Ndị mụrụ m naara m ekwe ntị m ruo otu ọnwa. Ha ekweghịkwa m gaa ebe ọ bụla m ga-ahụ ụmụ okorobịa ahụ.”
Ọ bụrụ na ị bụ papa Beverly na mama ya, gịnị ka ị gaara eme, maka gịnị? ․․․․․
Ì chere na ihe ahụ papa Beverly na mama ya mere ya adịghị mma? Ọ bụrụ na i chere otú ahụ, ọ̀ bụ maka gịnị? ․․․․․
Gịnị ka Beverly gaara eme ka ndị mụrụ ya malitekwa ịtụkwasị ya obi? ․․․․․
Ihe Ị Ga-eme Ka Ndị Mụrụ Gị Malitekwa Ịtụkwasị Gị Obi
Dị ka Lori na Beverly, ì meela ihe mere ka ndị mụrụ gị ghara ịna-atụkwasị gị obi? Ọ bụrụ otú ahụ, ka obi sie gị ike na e nwere ihe ị ga-eme ka ndị mụrụ gị malitekwa ịtụkwasị gị obi. Olee ihe ọ bụ?
Ọ bụrụ na ị na-akpa àgwà ga-eme ka ndị mụrụ gị tụkwasị gị obi, o nwere ike ime ka ha tụkwasịkwuo gị obi ma hapụ gị ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Annette ghọtara na ihe ahụ bụ eziokwu. O kwuru, sị: “Mgbe mmadụ ka dị obere, onye ahụ agaghị aghọtacha na ọ bara uru ịbụ onye a tụkwasịrị obi. Ugbu a, etoola m, m na-agbalịsikwa ike ime ihe ga-eme ka ndị mụrụ m na-atụkwasị m obi.” Gịnị ka i kwesịrị ịmụta n’ihe a? Kama iwe iwe na ndị mụrụ gị anaghị atụkwasị gị obi, gbalịa ka ị na-eme ihe ga-eme ka ha na-atụkwasị gị obi. Ime otú ahụ nwere ike ime ka ha hapụ gị ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme.
Dị ka ihe atụ, è nwere ike ịtụkwasị gị obi n’ihe ndị a e dere n’okpuru ebe a? Kanye ✔ n’àgwà nke ọ bụla i kwesịrị ịgbalịsi ike na-eme nke ọma na ya.
□ Ịlọta mgbe a gwara m lọta
□ Imezu nkwa m
□ Ịga ihe n’oge
□ Ịrụcha ọrụ e nyere m n’ụlọ
□ Iteta n’ụra n’echeghị ka mmadụ kpọtee m
□ Idebe ime ụlọ m ọcha
□ Ikwu eziokwu
□ Iji ekwe ntị ma ọ bụ kọmputa eme ihe bara uru
□ Ikweta ihe m mejọrọ na ịrịọ mgbaghara
Ọ́ gaghị adị mma ma i kpebisie ike na ị ga na-egosi na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi? Mee ihe ndị a Baịbụl kwuru: ‘Yipụnụ mmadụ ochie ahụ, nke kwekọrọ n’ụzọ unu si eme omume n’oge gara aga.’ (Ndị Efesọs 4:22) “Ka Ee unu bụrụ Ee.” (Jems 5:12) “Ka onye ọ bụla n’ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu.” (Ndị Efesọs 4:25) “Na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n’ihe niile.” (Ndị Kọlọsi 3:20) Ka oge na-aga, ọganihu gị ga-apụta ìhè n’ebe mmadụ niile nọ. Ndị mụrụ gị ga-ahụkwa ya.—1 Timoti 4:15.
Ma, ọ́ bụrụkwanụ na i chere na ndị mụrụ gị anaghị ahapụ gị mgbe ụfọdụ ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme n’agbanyeghị mgbalị gị niile? Ọ́ gaghị aka mma ka gị na ha kwurịta ya? Kama iji iwe na-agwa ha na ha kwesịrị ịna-atụkwasịkwu gị obi, jiri obiọma jụọ ha ihe ha chere i kwesịrị ime ka ha wee na-atụkwasịkwu gị obi. Kọwaara ha nke ọma ihe ị chọrọ ime banyere ya.
Echela na ndị mụrụ gị ga-agbanwe obi ha ozugbo. O doro anya na ha ga-achọ ka obi sie ha ike na ị ga-eme ihe i kwuru. Gosi ha ugbu a na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi. Ka oge na-aga, ndị mụrụ gị nwere ike ịtụkwasịkwu gị obi, na-ahapụkwu gị ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme. Beverly ahụ e dere ihe o kwuru ná mmalite mere otú ahụ. O kwuru, sị: “Ime ka ndị ọzọ tụkwasị gị obi anaghị adị mfe, ma ọ naghị esi ike ime ihe ga-eme ka ha kwụsị ịtụkwasị gị obi.” O kwukwara, sị, “Emeela m ka ndị mụrụ m na-atụkwasị m obi. Obi dịkwa m ụtọ n’ihi ya!”
GỤKWUO BANYERE ISIOKWU A N’ISI NKE 22 NA NWANNE AKWỤKWỌ A BỤ́ NKE 2
Papa gị na mama gị hà agbaala alụkwaghịm? Ọ bụrụ na alụkwaghịm ha gbara mere ka ike ụwa gwụ gị, olee otú ị ga-esi die ya?
^ par. 8 Ị chọọ ịgụkwu banyere ya, gụọ Isi nke 7 n’akwụkwọ a.
“Ka nnwere onwe unu ghara ịbụ ihe unu ga-eji na-ekpuchi ihe ọjọọ.”—1 Pita 2:16.
Kama iwe iwe na a naghị ekwe gị mee ihe ụfọdụ nwanne gị tọrọ gị na-eme, ka obi dị gị ụtọ na a na-ekwe gị mee ihe ụfọdụ a na-anabughị ekwe gị mee mgbe ị dị obere.
Ọ bụrụ na ndị mụrụ gị na-ahapụ gị ka ị na-eme ihe ọ bụla sọrọ gị, ọ naghị egosi na ha hụrụ gị n’anya, kama ọ na-egosi na ha na-eleghara gị anya.
Ihe ndị m chọrọ ka papa m na mama m na-atụkwasịkwu m obi na ha bụ: ․․․․․
Ọ bụrụ na papa m na mama m akwụsị ịtụkwasị m obi, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
● Gịnị nwere ike ime ka o siere papa gị na mama gị ike ikwe ka i jiri aka gị na-ekpebi ọtụtụ ihe ị na-eme n’agbanyeghị na ị na-agbalịsi ike igosi na e kwesịrị ịtụkwasị gị obi?
● Ọ bụrụ na ị mata otú gị na papa gị na mama gị ga-esi na-ekwurịta okwu nke ọma, olee otú ọ ga-esi mee ka ha na-ekwe ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ụfọdụ ị ga-eme?
“Mgbe m na-agwa ndị mụrụ m okwu, anaghị m ezoro ha nsogbu m na ihe na-echegbu m. Achọpụtara m na o meela ka ọ dịrị ndị mụrụ m mfe ịtụkwasị m obi.”—Dianna
[Ihe Osise/Foto dị na peeji nke 23]
Ịghọ onye toro eto a tụkwasịrị obi dị ka ebe mmadụ ji nwayọọ nwayọọ na-arị steepụ ụlọ elu, na-arị ya otu otu
ONYE NA-ETO ETO
ONYE TORO ETO
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme Ka A Hapụ M Ịna-ekpebi Ihe M Ga-eme?
yp1 isi 3 p. 21-27